एमाले एकताको जिम्मा पाएका ओलीको रुखो भाषा : बाटो बिराएकालाई आममाफी दिन्छु ! - Kantipath.com
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पार्टी एकताको जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ । बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिन अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पार्टी एकताका लागि आममाफी दिएर भए पनि धेरै व्यक्तिलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको ज्ञवालीले बताए । विघटित कार्यदलको बैठकमा निरन्तर छलफल जारी रहेको पनि उनले बताए । ओलीले बाटो बिराएकाहरुलाई आममाफी दिने बताएका छन्। शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसदलाई एमालेले यस्तो अपराधपूर्ण काम किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको भलिपल्ट ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। बिहीबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले नेपाल पक्ष पार्टीमा फर्किए ‘एम्नेष्टी इज ग्रान्टेड’ भएको बताए।
उनले एमालेलाई कस्तै रोक्छु भन्ने कल्पना नगर्न चेतावनी दिए। ‘बाटो विराएका भड्किएका साथिहरुलाई भन्छु, पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहान्छु एकताका लागि जे सुकै भएको होस्, यस पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि, –सबैलाई ‘एम्नेष्टी इज ग्रान्टेड’, ओलीको भनाइ थियो।
एमाले कांक्राको चिचिलो नभएको बताउँदै उनले भने, ‘एमाले कांक्राको कुनै चिचिलो होइन औंला ताक्ने वित्तिकै कुहिने।’ आफ्नो सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसकेपछि अदालतको सहारा लिएको उनको भनाई छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सचिवालयले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्ने समय तय नभएको स्पष्ट पारेको छ । नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले नेपाल र ओलीबीच भेट नभएको र भेट्ने समयसमेत तय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएपछि शीर्ष नेताहरूबीच भेट हुन लागेको चर्चा चलेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाल पक्ष सहभागी भएको थिएन ।
Previous Previous post: सुवासचन्द्र नेम्वाङले फैलाए माधव र केपीको भेट हुने भन्दै अफवाह !
Next Next post: भक्तपुरको सल्लाघारीमा ३.५ म्याग्निच्युटको भूकम्प
‘स्यालको तुलना सिंहसँग गर्न सकिन्न’ : अध्यक्ष प्रचण्ड
प्रचण्डलाई जुत्ता प्रहार गर्ने ‘रतन’ पक्राउ
प्रधामन्त्री ओलीको शरिरमा ४ वटा मिर्गौला